Tuesday, 04.07.2020, 04:09pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 05.17.2017, 12:04pm
अधिकार या शक्ति यस्तो बस्तु रहेछ, उस्तै नपरेसम्म कसैले पनि छोड्न नचाहने । मुखका प्रगतिशील, तर व्यवहारमा ज्यादै संकीर्ण । त्यसैमा पनि पुराना ठूलाठालु सामन्तका अवशेष त झन गुमेको शक्ति हातपार्न जेजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्न पनि पछिनपर्ने ।
Wednesday, 05.17.2017, 12:03pm
स्थानीय निर्वाचनको वैतरणी एक्लै पार गर्ने ह्याउ–हुती हराएर पनि हुनसक्छ, साना ठूला सबै दलले हतार हतारमा “चुनावी तालमेल गरेको घोषणा गरेको सुनियो । त्यस्तो तालमेल गरेर चुनाव लड्ने” भन्ने पार्टी र नेताका हुक्मनामा, कुन कुन पार्टीका छोटे नेता र कार्यकर्ताले तामेल गरे वा परिपालना गर्लान् (?) त्यो त निर्वाचन परिणामले देखाउने हो ।
Thursday, 05.11.2017, 11:39am
अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको वातावरण छ । उम्मेदवारी दिएका दलहरुले आआफ्नो बखान गरेर थाकेका छैनन्न । अनेक बुट्टादार योजना, नीति र कार्यक्रम बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । र उनीहरुले यस्तै कुरा अघिअघि पनि गरेको भने बिर्सिसकेका छन् ।
केही महिना पहिले एउटा निकै दर्शकले रुचाए–पत्याएको टी.भी.च्यानलले “पाकिस्तानमा रहे बसेका सनातन वैदिक धर्मानुयायीहरुमाथि सीमान्त उत्पीडन थोपरिएको” परिदृश्य प्रस्तुत गरेको थियो ।
Tuesday, 05.02.2017, 02:00pm
राजनीतिक स्वतन्त्रताको महत्व त्यसो दुरुपयोग नहुन्जेल मात्र रहन्छ । अधिकार अथवा सत्ता पाएपछि मान्छे कसरी विग्रन्छ भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद र बाबुराम मन्त्रिमण्डलका चरित्रको अधःपतनको पराकाष्ठाले देखाएकै हो । त्यसैको बिंडो दाहालले थाम्दैछन् । जनताले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने शुद्धि शासन गर्नेहरुमा नआएसम्म उधारो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
Tuesday, 05.02.2017, 01:59pm
उहिले पंचायती राजको शुरुआति दिनमा पङ्क्तिकार कास्की पोखराबाट भर्खर मात्र काठमाडौं छिरेको थियो । त्यसबेला थापाथलीको पुल तरेर अशोक सिनेमा हलमा जाँदा र फर्किंदा बाटोको वाग्मती पूरा स्वच्छ र भुइँमा भूरा माछा स्पष्टै देखिने थियो । वाग्मती मात्रै होइन । वालाजूका बाईसधारा नुहाउन जाँदा बाटोमा पर्ने विष्णुमति, पशुपति जाँदाको बीच बाटोको धोवीखोला सबै कञ्चन थिए ।
Tuesday, 04.18.2017, 11:25am
मानवीय सृष्टि होस् वा इश्वरीय सृष्टि त्यसको अवशान निश्चित छ । पाश्चात्य अन्वेषकहरुले उल्लेख गरेका माया सभ्यता होस् वा मेसो पोटामियन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता होस् वा रोमन सभ्यता, इजिप्टको प्राचीन सभ्यता वा इन्दुु सभ्यता, पर्सियन होस् कि ह्वाङ्हो सभ्यता ईशापूर्व विकसित यस्ता सभ्यतामा जीवनशैली मात्र उच्च थिएनन्, विकासवादको पाश्चात्य शैलीभन्दा फरक भए पनि त्यस्ता सबै सभ्यता पूर्ण विकसित सभ्यता हुन् भन्ने अभिलेख पाइन्छ । पुरातात्विक अन्वेषणले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।
Tuesday, 04.18.2017, 11:24am
भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्योभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ त्यसै भनिएको हैन होला । हाल स्थानीय तहलाई दिने भनिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने आधारभूत भौतिक आवश्यकता, वातावरण र कार्यान्व्यन गर्ने संयन्त्रको क्षमतातर्फ ध्यानै नदिई हचुवाका भरमा आदेश दिएर मात्रै हुन्छ ?
Tuesday, 04.18.2017, 11:23am
“नेपालको सम्पूर्ण गरीवी, भ्रष्टाचार, कुशासन, पछौटेस्थितिदेखि विद्यमान शोषण, उत्पीडन, विभेदको कारक तत्व भनेकै सामन्ती राज्य व्यवस्थादेखि पूँजीवादी पश्चिमा दलाल संसदीय शासन प्रणाली हो । यस्को अन्त्य भए, गरेपछि यो देशका सम्पूर्ण विपन्न, सीमान्तीकृत, गरीव वर्ग, समाज, समुदायको समुत्थान र विकासको युग शुरु हुने” सपना बाँडेर २०५२ सालमा शुरु गरिएको सशस्त्र जनविद्रोहमा, १५–२० हजार युवाहरु मरे, मारिए
Tuesday, 04.11.2017, 03:59pm
प्रजातन्त्रको नाममा पार्टीतन्त्रको मजबुत पकड भएपछि सर्वत्र राजनीतिककरण हुँदैजान्छ । राजनीतिक महत्वकांक्षाले राष्ट्रका परिचय चिन्ह र परम्परागत मूल्य, मान्यता र अवधारणाको वास्ता गर्दैन । यस्तो व्यापारिक प्रजातन्त्रलाई पोषण दिन लोकलाज र लोकभय पचाएर नेताहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन् । त्यसैले दुर्दशा नै दुर्दशा निम्त्याउँछ ।
Tuesday, 04.11.2017, 03:58pm
कुनै पनि कुरा जनचाहना अनुरुप सहजरुपमा आउँछ र लागू गरिन्छ भने त्यो पाच्य हुन्छ । तर, असहजरुपमा र जनतालाई भ्रममा राखेर जनतामा लादिन्छ भने त्यसलाई जनताले पचाउन सक्दैनन् । जनताका लागि भनेर जनताकै इच्छा विपरीत कसैको निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि कतैको इशारामा लागू गरिने व्यवस्थाले उल्टै अव्यवस्था मात्रै ल्याउँछ ।
Tuesday, 04.11.2017, 03:55pm
“हातहातमा मोवाइल, घरघरमा इन्टरनेट” को नीति पूर्ण सफल भएको छ । हुँदा हुँदा खातेपाते र सडक छेउमा कचौरा थापेर भीख माग्नेहरुका हातमा पनि मोवाइल पुगिसकेको छ । तर त्यससँगै देशभित्रको कति रकम र उत्पादनशील समय खेर गइरहेछ ? त्यस्ले कति थरीका अपराध बृद्धि गरिरहेछ ?
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव
Wednesday, 03.22.2017, 02:42pm
हामीकहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै राजनीतिमा मन्थरा प्रवृत्तिको संक्रमण बेलाबेलामा फैलिएको देखिएकै हो । ‘मन्थरा’ एउटा मनोविकार हो । त्यसले मान्छेलाई नराम्रोसित ढुन्मुन्याउँछ । मन्थराले महारानी कैकेयीको मानसिकता बिथोलेर रामायण काण्ड नै मच्चाइन जसको परिणाम नेपालले पनि व्यहोर्नुपरेको थियो ।
Wednesday, 03.22.2017, 02:40pm
राष्ट्रिय राजनीति, शासन सत्ता नियन्ताहरुले अख्तियार गर्दै आएको शैली, नीतिको निर्ममतापूर्वक चिरफार वा विश्लेषण गरियो । त्यस्का सम्पुष्टिका क्रममा जेजस्ता दृष्टान्त उदाहरण वा घटनावलीलाई साक्ष्यको रुपमा प्रस्तुत गरिएको र त्यो सबैका आधारमा राष्ट्रको भाग्य, भविष्यबारे प्रक्षेपण गरियो । ती सबैलाई त्यही परिवेश र परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु र बुझ्नु सही, न्यायपूर्ण र विवेकसम्मत हुनेछ
Tuesday, 02.28.2017, 11:22am
राजनीतिक अस्थिरताले स्थायी रुप लिनु आज हाम्रा अगाडि जटिल समस्या भएको छ । यहाँका दलहरुका कमी कमजोरी बुझेर खेल्न आउने बाहिरी शक्तिले यहाँ स्थिरता चाहँदैनन् । नेपालमा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको उनीहरुलाई मन पर्दैन । एउटै दलले बहुमत नल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न पनि बाह्य शक्ति नै लागिपरेका छन् ।
Tuesday, 02.28.2017, 11:20am
तेईस वर्षे पंचायत व्यवस्थाको पछिल्लो दशकका दुई विपरीत स्वभाव र चरित्रका नेता सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले निर्दलीय प्रणालीको पतनोपरान्त एकै मिति, तिथि र साईतमा एकै नामको पार्टी रा.प्रा.पा. (थापा) र (चन्द) स्थापित गरेका थिए । त्यस्मा पौराणिक कथाको भारण्ड नामको एउटा जिउ दुई टाउके पंक्षी जस्ता भनौं या १०–१५ वर्ष अघि निकै चर्चित गंगा–जमूना नामका टाउको जोडिएका दुई नानीहरु जस्तै गरी जन्मिएका पार्टीबीच धेरैपटक एकीकरण र विभाजन भएको थियो ।
‘प्रजातन्त्र’ भन्नाले जनइच्छाको सम्मान हुने र व्यक्तिका अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था भनेर बुझिन्छ । यस मानेमा सार्थक काम भए मात्र जनताले विश्वास गर्छन् । बहुमतको शासन भन्दैमा पनि हुँदैन, काम पनि जनताका पक्षमा हुनुपर्छ । आज यहाँ प्रजातन्त्रकै मूल्य–मान्यताको उपेक्षा र जनताको मनोबल कमजोर पार्ने काम भैरहेका छन् ।
Wednesday, 02.15.2017, 12:47pm
वार्वरिक भएर हामीले हाम्रै विगत र दृष्टिकोणलाई घोत्लिएर हेर्ने हो भने “हामी नेपालीहरू सबै नकारात्मक वा अँध्यारो पाटोतिरलाई हेरेर रमाउँँदा रहेछौँ” जस्तो लाग्छ । कसैको राम्रो कुराको चर्चा वा प्रसंशा– त्यो पनि उस्को अनुपस्थितिमा– गर्नु प¥यो भने साह्रै कनिकुथी र जिब्रो चपाई–चपाई नापेर तौलेर गर्ने, तर बद्ख्वाई वा दुरालोचना गर्नु पर्दा धाराप्रवाह, गडगडाएर र बेहिचक गर्ने रहेछौँ ।
Tuesday, 01.31.2017, 11:31am
पंचायतकालमा एउटा भनाई थियो– ‘कम्युनिष्टहरु जेल परेपछि मोटाउँछन् भने कांग्रेसीहरु जेल परेपछि दुब्लाउँछन् ।’ हुन पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो । भूमिगत भएर काम गर्दा दुःख पाएर दुब्लाएका कमरेड पक्रिएर जेलमा बसेर आरामसंग खान पाउँदा मोटाएका हुन्थे भने बाहिर आरामसंग बसेका सौखीन कांग्रेसी जेल पुगेपछि दुब्लाएका हुन्थे ।
Tuesday, 01.31.2017, 11:28am
विश्व भविष्य उर्जा (वल्र्ड फ्यूचर इनर्जी) सम्मेलन “संयुक्त अरव इमिरेड्स” को राजधानी अवुधावीमा हालै सम्पन्न भयो । कैयन् देशका सरकार प्रमुख, सरकारका उच्चस्तरका प्रतिनिधि र ठूला लगानीकर्ताहरु समेतको उपस्थिति र सहभागिता भएको उच्च सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको समाचार सुनियो
» अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए
» शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य
» रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म
» सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति
» प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
» संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ?
» माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती
» को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ?
» जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन
» मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ?
» संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न
» समस्याको मूल जरो संघीयता
» वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?)
» संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ
» मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ?
» लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद
» यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन्
» सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार
» भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबारे घोत्लिंदा
» दशैंको परम्परा र जीव–जगत्